औषधी विनानै उपचार – Rara Khabar
औषधी विनानै उपचार
राजेन्द्र विष्ट (हेल्थ एण्ड वेलनेस कोच)
प्राचिन कालमा मनुष्य जीवन अति नै प्राकृतिक थियो । उनीहरु रोग मुक्त थिए । स्वच्छ हावामा घुमफिर गर्ने , शितल छायाँमा विश्राम गर्नु, कन्दमुल र फलहरु सेवन गर्नु, माटोसँग सिधा सम्बन्ध बनाउनु, स्वच्छ र सफा पानी पिउनु, वातावरण हरियाली र प्रदुषण मुक्त जस्ता कारणले मानिसहरु रोग मुक्त थिए । जसरी सभ्यताको विकास हुँदै गयो, जनसंख्या बढ्दै गयो बस्नको लागि नगर, गाउँ, शहर, महानगरहरु विकास हुँदै गए र मानिसहरुको क्रियाकलापले गर्दा वातावरण प्रदुषित हुन थाल्यो । परिणाम स्वरुप जटिल खालका रोगहरु फैलिन थाले ।
आज मानिसहरु मानसिक एवम् शारीरिक कुनै न कुनै रागेबाट पिडित भइरहेका छन् । यसले गर्दा मानिसमा तनाव र मनोरोगले जरा गाड्दै ग्रसित पारिरहेको छ । आधुनिक विज्ञानको तेज विकासको कारणले अनेक सुविधा, आराम, अनेकथरी साधनहरुको पहँचमा मानिस रुमलिरहेको छ । यिनै कारणका बाबजुत पनि मानिसले आफुलाई यान्त्रिक युगमा पु¥याइरहेको छ । मानिस शारीरिक एवम् मानसिक रुपमा आफ्नो शक्तिको अन्त्य गरिरहेको छ ।
यसैको फलस्वरुप विभिन्न डरलाग्दा रोगहरु जस्तै मधुमेह, हृदयरोग, क्यान्सर, पेटको रोग, थाइराइड सम्बन्धि रोग नशा सम्बन्धि रोगहरुमा दिनदिनै वृद्धि भइरहेको छ । विभिन्न अज्ञानता, आफूखुसि औषधि सेवन, गलत औषधिका असर आदि कारणले मानिसले आफ्नो जीवन शक्ति आफैले ह्रास गरिरहेको छ ।
आज मान्छेले जानेर वा नजानेर प्राकृतिक नियमलाई मिचेर खान पान, रहन सहन, व्यवहार, कर्मलाई बिर्सेर आफ्नो शक्तिलाई क्षिण बनाइरहेको छ । स्वास्थ्य रक्षाको निम्ति प्राचीन ऋषिमुनि वा वैज्ञानिकद्धारा खोज गरिएको प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतिले हाम्रो इच्छाको अनुरुप कार्यक्षमता बढाउने र जीवनमा खुसी एवम् सुखी बनाउने क्षमता राख्दछ ।
यदि शरिरमा कुनै किसिमको रोग वा खराब लक्षण देखिन्छ भने प्रकृतिमा रहेका तत्वहरु जस्तै पानी, माटो, हावा प्रकाश, जडिबुटी आदि द्धारा तुरुन्त रोगहरुमाथि नियन्त्रण गरिन्छ र शरिरलाई क्षमतावान बनाउनुलाई प्राकृतिक चिकित्साको नामले जान्नुपर्छ । प्राकृतिक चिकित्सा स्वस्थ जीवनशैली र औषधिरहित विभिन्न प्राकृतिक सिद्धान्तमा आधारित वैज्ञानिक कला हो ।
प्राकृतिक चिकित्सा वायु, प्रकाश, जल, आकाश तथा अन्य प्राकृतिक तरिका वा पद्धतिबाट कनुैपनि मानव रोग, चोट शारिरीक विकिृति, रसायनिक वा मानसिक खराबी आदिको निदान उपचार वा सल्लाह दिने एउटा चिकित्सा पद्धति हो । यसलाई अंग्रेजीमा Naturecure वा Naturopathy treatment पनि भनिन्छ । Naturopath भन्ने शब्द Greek भाषाबाट आएको हो । जसलाई साहित्यीक भाषामा अनुवाद गर्दा “Nature disease” भनिन्छ ।
यो शब्द सर्वप्रथम John Scheel भन्ने व्यक्तिले सन् १८९५ मा पत्ता लगाएका थिए र यसलाई फैलाउने काम Bededict Lust ले गरेका हुन् । Benedict Lust लाई आधुनिक प्राकृतिक चिकित्साका पिता पनि भनिन्छ ।
इतिहास ः इसापूर्व ४०० वर्ष पहिले ग्रीसका हिपोकेट्सलाई प्राकृतिक चिकित्साका पिता भनिन्छ । उनले लेखेको पुस्तकमा उनले समयमा करिब २६५ औषधिको आविष्कार भइरहेको मानिन्छ । हिप्पोके्रट्स र उनका चेलाहरु उपचारको समयमा भोजन दिने बेला विशेष ध्यान दिन्थे र विविध रोगहरुको लागि यसै अनुपातमा खानेकुराहरु थोरै या धेरै दिने गर्थे । हिप्पोक्रेट्स लाई पानीको भौतिक विशेषताको बारेमा पूरा ज्ञान भएको पाइन्छ ।
प्राकृतिक चिकित्सा भन्ने शब्दको प्रयोग सर्वप्रथम १८९५ मा John Scheel ले गरेका थिए । यसलाई व्यापक बनाउने काम Benedict Lust ले गरेका थिए । Benedict Lust लाई उपचारमा पानीको र अन्य प्राकृतिक तत्वको महत्वको बारेमा Germany मा ँFather Sebastian Kneipp ले शिक्षा दिएका थिए । . Kneipp ले Lust लाई औषधिविना कसरी रोग निको पार्न सकिन्छ भन्ने जानकारी गराउन अमेरिका पठाए ।
Lust ले प्राकृतिक चिकित्सालाई बहुआयामिक विषयको रुपमा अमेरिकीहरुलाई बुझाए । उनले रोगउपचारका निम्ति पानी जडिबुटी, होमियोप्याथी औषधिको कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा सिकाए । पछि १९०१ मा Benedict Lust ले न्यूयोर्कमा American School of Naturopathy को स्थापना गरे । सन् १९०२ मा अमेरिकामा Naturopathic Societies को स्थापना गरे । यसैगरी सन् १९१९ मा Lust ले American naturopathic Association को सथापना गरे । यसपछि अमेरिकी naturopathic वा Drugless practitioners को कानुनमा दर्ता भए । यसैसँग अमेरिकामा दर्जनौ Naturopathic स्कुलहरुको स्थापना भयो । पछि सन् १९२८ देखि १९४० को दशकमा पेनिसिलिन लगायत चमत्कारिक औषधिको आविष्कार र प्रसिद्धिले गर्दा आधुनिक चिकित्सा प्राकृतिक चिकित्सासँग हावि हुनु हो । यसको परिणामा धेरै प्राकृतिक चिकित्सा कलेजहरुले आफ्नो कलेजबाट ND डिग्री हटाए । सन् १९५८ पछि २५ भन्दा बढी राज्यमा रहेको Naturopathy licensed ५ राज्यभित्र मात्र सिमित भयो ।
अमेरिकी डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थ एजुकेशन एण्ड वेलफेयर ले एउटा रिपोर्ट जारी गरि प्राकृतिक चिकित्सा शिक्षालाई अपुरो मेडिकल शिक्षा भनि घोषणा ग¥यो । यसैगरी सन् १९७७ मा अष्ट्रेलियन क्ष्लत्रगष्चथ समितिले अमेरिकी डिपार्टमेन्टको जस्तै निष्कर्ष निकाली प्राकृतिक चिकित्सकलाई लाइसेन्स नदिने निर्णय ग¥यो । सन् २००९ मा प्राकृतिक चिकित्साको उपयोगिताको बारेमा सचेत भइ पहिले गरेको निर्णयलाई अमेरिकी स्वास्थ्य तथा शिक्षा विभागलाई चिकित्सकको लाइसेन्स प्रावधानलाई १५ वछा राज्यमा बिस्तार ग¥यो । सन् १९७० को दशकपछि मान्छेहरुमा प्राकृतिक चिकित्साको रुचिवृद्धि भई अमेरिका र क्यानडा भरी फैलिएर ‘Holistic health Movement’ को रुपमा फैलिएको पाइन्छ ।
त्यसपछि अमेरिका लगायत अन्य यूरोपियन देशहरुमा थुप्रै प्राकृतिक चिकित्सा सम्बन्धि कलेज र विश्वविद्यालयहरु खुलेको थिए । आधुनिक प्राकृतिक चिकित्साको क्रान्ति Germany बाट शुरु भएको पाइन्छ र जर्मनीबाटै अन्य देशमा फैलिएको थियो । मुख्य गरेर Water Cure हाइड्रो थेरापि पश्चिमि देशहरुमा फैलिएको हो ।
पानीबाट उपचार हुन्छ र यसलाई विश्वभरि फैलाउने श्रेय मुलत Vincent Priessnitz लाई जान्छ । यस कार्यलाई पछि गएर Johannes Schroth ले अगाडि बढाए । प्राकृतिक चिकित्साको पुनर्विकास र वर्तमान उन्नतिको मुल श्रेय Louis Kuhne लाई जान्छ । यसैगरी प्राकृतिक चिकित्साको क्षेत्रमा एडोल्फ जस्टको नाम पनि चर्चित छ । उनले Return to Nature नामको पुस्तक लेखेर प्राकृतिक चिकित्सामा नयाँ विचार प्रस्तुत गरे र उनले साधारण माटोको प्रयोगद्धारा सबै रोगहरुको उपचार सम्भव छ भन्ने कुरा पत्ता लगाए । प्राकृतिक चिकित्सामा योगदान दिने अन्य व्यक्तिहरु डा. हेनरी लिन्डलाहर आरनोल्ड इष्ट डि.डि पालमर, फादर निक, हेनरी बेन्जामिन आदि हुन् ।
प्राकृतिक चिकित्साको मूल सिद्धान्त अनावश्यक विजातिय वस्तुको शरीरमा सञ्चिति हुनु रोगको कारण हो भने शरिरभित्र रहेका विजातिय वस्तुलाई बाहिर निकाल्नु उपचार हो । प्रकृति आफै महान उपचार कर्ता हो । प्राकृतिक चिकित्सामा रोग भन्दा रोगी व्यक्तिको उपचार हुन्छ ।
प्राकृतिक चिकित्साले सम्पूर्ण शरीरलाई एउटा एकाइको रुपमा उपचार गर्छ , यसले अंगअंगमा गएर उपचार गर्दैन, प्राकृतिक चिकित्सामा औषधिको प्रयोग हुँदैन, खानालाई मुख्य औषधि सम्झने गरिन्छ । प्राकृतिक चिकित्सामा चिकित्सकलाई भन्दा प्रकृतिलाई महान मान्ने गरिन्छ । यस चिकित्सामा चिकित्सकले भन्दा बढि मेहेनत रोगीले गर्नुपर्छ ।
प्रकाशित मितिः १ श्रावण २०७४, आईतवार १२:४३